मेलबर्न र सिड्नीमा ह्वात्तै बढ्यो कोरोनाको संक्रमण, एकैदिन ३३ सय ६४ नयाँ संक्रमित ! « KBC khabar
मेलबर्न र सिड्नीमा ह्वात्तै बढ्यो कोरोनाको संक्रमण, एकैदिन ३३ सय ६४ नयाँ संक्रमित !
१ पुष २०७८, बिहीबार ००:२२
अष्ट्रेलियामा कोरोना भाईरसका नयाँ संक्रमित ह्वात्तै बढेका छन् । गएको २४ घण्टामा मात्रै दुई ठूला राज्यमा गरी ३३ सय ६४ कोरोनाका संक्रमित थपिएका हुन् । डिसेम्बर १ तारिखबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि ढोका खुल्ला गरेको अष्ट्रेलियामा यो संक्रमणको बृद्धिदर भने आन्तरिक हो ।
भिक्टोरियामा गएको अक्टोबर महिनायताकै सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमित भेटिँदा राज्यमा कूल १२ हजार २ सय ६३ कोरोना संक्रमित संख्या पुगेको छ । एकैदिनमा ९ जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले खोपलगाइसकेका कारण कोरोना संक्रमण भएपनि यो घातक नहुने अनुमान छ । यसैबीच, भिक्टोयिामा अत्यावश्यक बाहेकका खुद्रा पसलहरुमा जाँदा अब दुबै डोज खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका भिक्टोरियनहरुले यस्ता ठाउँमा जाँदा यसअघि अनिवार्य रुपमा दुबै डोज खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने थियो ।
यससँगै रियल स्टेटमा, पूजा गर्ने स्थलहरुमा, विवाह र अन्तिम संस्कारमा सहभागीहरुले पनि अब खोपको प्रमाण देखाउनु पर्ने छैन । खोप लगाउने जनसंख्या ९० प्रतिशतमाथि भएपछि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
More data soon: https://t.co/OCCFTAtS1P#COVID19Vic #COVID19VicData pic.twitter.com/NTpUJZlGPN
— VicGovDH (@VicGovDH) December 15, 2021
भिक्टोरियालाई उछिन्यो न्यूसाउथवेल्सले
उता जनसंख्याको हिसाबले अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो राज्य न्यूसाउथवेल्समा दैनिक कोरोना संक्रमण संख्या १७ सय ४२ पुगेको छ । आज विहान सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार गएको सेप्टेम्बर ११ पछि यो नै सबैभन्दा धेरै दैनिक संक्रमणदर हो । राज्यमा १ लाख ४३ हजार ९ सय ३८ जनाले एकैदिनमा कोरोनाको परीक्षण गराएका छन् ।
क्रिसमस र नयाँ वर्षको लामो बिदा जानुअघि मानिसहरुले यात्राका लागि परीक्षण गराउने क्रम बढेको हो ।
न्यूसाउथवेल्सका स्वास्थ्यमन्त्री ब्राड हजार्डले यो सुरुवातमात्र भएको र अर्को महिना दैनिक २५ हजार नयाँ कोरोना संक्रमित थपिनसक्ने बताएका छन् । कोरोना संत्रमित बढेपनि अस्पताल नै भर्ना हुने संख्या भने स्थीर देखिएको छ । यो खुशीको कुरा हो ।
अष्ट्रेलियामा खोप विरोधी प्रदर्शनहरु पनि बढिरहेको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतमाथि खोप लगाउने जनसंख्या पुगेपछि अहिले अनिवार्य खोपको व्यवस्था विभिन्न राज्यमा हटाइएको छ भने यसरी खोप नलगाएकाहरुलाई पनि अन्य सरह विभिन्न ठाउँमा जान दिनेगरी प्रतिबन्ध खुल्ला पारिएको छ ।